တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားများ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် မွန်ပြည်နယ်၌ စာစစ်ဌာန - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားများ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် မွန်ပြည်နယ်၌ စာစစ်ဌာန
မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈-မွန် ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ အတွင်း ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြ မည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ သွားလာမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေ ရေးအတွက် စာစစ်ဌာနငါးခု တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စိစစ်ထောက်ခံ တင်ပြထားကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှသိရသည်။
“”ကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့အခါ သွားလာလမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မသမာမှုကင်း ရှင်းရေးစတာတွေကို အဓိကထား စိစစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပေါင်မြို့နယ်၊ အလှပ်ကျေးရွာ အထကမှာ စာမေး ပွဲဖြေမယ့် ကျောင်းသားဦးရေ ၂ဝဝ ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ သူတို့တွေ ပေါင်မြို့အထကမှာ လာဖြေကြရ မယ်ဆိုရင် ဝေးတဲ့အတွက်ရယ်၊ မ သမာမှုကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့် အပိုင်းမှာလည်း ကျောင်းသားနည်း ရင် ကြီးကြပ်ရတာပိုပြီးထိရောက်ပါ တယ်။ အဲဒီအတွက် စာစစ်ဌာနငါးခု တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ စိစစ်ထောက်ခံ တင်ပြထားပါတယ်””ဟု မွန်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူး ဦးမျိုးတင်အောင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါထောက်ခံတင်ပြထား သည့် စာစစ်ဌာနငါးခုမှာ ပေါင်မြို့နယ်၊ အလှပ်ကျေးရွာ၊ အလှပ်အထက၊ သထုံမြို့နယ်၊ ကြာပန်းကျေးရွာ၊ ကြာပန်းအထက၊ နောင်ကုလားကျေးရွာ၊ နောင်ကုလားရှမ်းရွာအထက၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ရွှေလှေကျေးရွာ၊ ရွှေလှေအထက၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ရွှေနတ်တောင်အထကတို့ဖြစ်သည်။
“”စာစစ်ဌာနအသစ်ခွင့်ပြုချက် ရရှိဖို့အတွက် အချက်လေးချက်ကို အဓိကထားပြီး စိစစ်ထောက်ခံတာ ဖြစ်ပါတယ်””ဟု မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထိန်လင်းက ပြောကြားသည်။မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စာစစ်ဌာန ၄၈ ခု၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ် လ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်စာစစ် ဌာန ၅၀ ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါ က ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲစာစစ်ဌာန ၅၅ခုရှိလာ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီနယ်စပ်မှ တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU ဖြင့် ထွက်ခွာသူ မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ရက်တည်း ၁၁၁၂ ဦး?
မြဝတီမြို့ရှိဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများတွင် နိုင်ငံခြားသားများကို ဥပဒေနှင့်အညီ လက်ခံရန??
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများကို ကြိုးစား ဆောက်လုပ်ပေးနေဟု ?
မှုခင်းပညာပေးပြခန်း ယာဉ်ဖြင့် မှုခင်းအသိပညာပေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်